Netflix yaizoda kubvumidza kutamba kunze kwenyika gore rino | IPhone nhau
Iyo yekutenderera yevhidhiyo chikuva iyo parizvino inotonga pasirese ndeyeNetflix. Muchokwadi, inowanikwa mune dzese kunze kwenyika ina. Netflix, zvinoenderana nenyika, ine mhando dzakasiyana dzemukati dzatinogona kutamba kubva kune chero chishandiso kuti iwe une iyo yeNetflix application, iyo parizvino iri mune ese musika ecosystems.
Kwemakore, kwave kune vazhinji vashandisi vanogara vachiita vakumbira mukana wekugona kurodha zvirimo papuratifomu uye kugona kunakidzwa neinternet, kana tisina internet yekubatana, kunyangwe iri patinoenda munzira yepasi pevhu, mundege, mubhazi, muchipatara ... asi chikuva chagara chakasiya nzeve .
Parizvino zvese Spotify neApple Music zvinotibvumidza kurodha zvirimo kuti tikwanise kuzvitamba tisina kushandisa yedu data rate. Zvemukati zvakadaro DRM yakachengetedzwa uye haigone kuburitswa kubva mairi kuti ibudiswe pane mamwe majaira, saka pfungwa yeNetflix haina kumbobvira yaita zvine musoro, nekuti nekuchengetedza zvirimo nenzira iyi vanoona kuti haitenderi zvakasununguka paInternet.
Asi zvinoita sekunge pakupedzisira vatungamiriri vekambani vanojekesa uye inotungamira kambani mumusika wekutenderera wevhidhiyo inobvumidza zvemukati kuti zvinyorwe pasi pekutamba pasina kana mwaka uno, sezvo isu takakwanisa kuverenga muGizmodo USA uye LightReading. Sezviri pachena yaifanirwa kuve iye CEO weNetflix uyo akakwanisa kugonesa timu yekutungamira kuti nezviyero zvazvino zvekuchengetedza, njodzi yekuti zvinyorwa zvavo zvichatanga kutenderera zvakasununguka painternet zvakaderera kwazvo.
Parizvino hapana chepamutemo, asi zvinoenderana nezvinyorwa izvi, zvinowanzoitika kuti gore risati rapera tinokwanisa kurodha pasi zvatinofarira tisati taenda parwendo. Mukushaikwa kwemamwe ruzivo, isu hatizivewo kana iyi sarudzo Ichave ichiwanikwa kune zvese zvirimo kana chete kune akateedzana ayo Netflix ane.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Netflix yaizoda kubvumidza kutamba kunze kwenyika gore rino
Anonakidza! Ndiri kuona zvakateedzana mudziva uye Internet haishande mushe imomo. Kugona kurodha pasi mwaka kunopfuura kukwana kuva nezviri mukati kuti utarise pasina kucheka
iCloud Drive muIOS 10 uye macOS Sierra, izvo vazhinji vedu vaitarisira